May 16, 2020 - Lupyo News
October 1, 2020 May 16, 2020 by Lupyo News
တွဲကျလာသောရင်သားများကို အရင်လိုပြန်လည်တင်းရင်းစေနိုင်မည့်နည်းလမ်းများ နို့တိုက်ရတာ၊လေ့ကျင်ခန်းလုပ်တာ၊အမျိုးသမီးများသွေးဆုံးချိန်နဲ့အ၀လွန်တာတွေကြောင့် ရင်သားတွဲကျတာတွေဖြစ်ပေါ် တတ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကို ကူညီပေးနိုင်မယ့် သဘာဝနည်းနဲ့ရင်သားပင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ချို့ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ (၁)ကြက်ဥအနှစ်၊ဒိန်ချဉ်နှင့်ဗီတာမင်အီးအဆီ ကြက်ဥအနှစ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း၊ဗီတာမင်အီးအဆီလက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းနဲ့ဒိန်ချဉ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းတို့ကို ဖျော်စက်ထဲမှာ ရောပြီးမွှေပါ။ပျစ်သွားတဲ့အထိ မွှေပါ။ပြီးရင်တော့ ရင်သားပေါ်မှာ လိမ်းပေးပြီး မိနစ်(၃၀)ကြာအောင်ထားပါ။ပြီးရင်တော့ ရေအေးနဲ့ဆေးချပေးပါ။ဒီနည်းအတိုင်း ပုံမှန် ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ တင်းရင်းတဲ့ရင်သားအလှကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် (၂)မက်မွန်ဆီနှင့်နို့ခရင်မ် မက်မွန်ဆီလက်ဖက်ရည်(၃)ဇွန်းနဲ့နို့ခရင်မ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း(၄)ဇွန်းတို့ကို ရောပြီးမွှေပါ။ပြီးရင်တော့ ရင်သားပေါ်မှာ လိမ်းပေးပါ။(၁၅)မိနစ်လောက်ကြာအောင် ညင်ညင်သာသာပွတ်လိမ်းပေးပြီးနောက် (၁၀)မိနစ်လောက်ကြာအောင် ထားပေးပါ။ပြီးရင်တော့ ရေအေးနဲ့ဆေးချပါ။ဒီနည်းလမ်းဟာ ရင်သားကို သဘာဝအတိုင်း တင်းရင်းလှပစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၃)မက်မွန်ဆီ မက်မွန်ဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း(၂)ဇွန်းကို ရင်သားပေါ်မှာ လိမ်းပေးပြီး၊(၁၀)မိနစ်လောက် ရင်သားကို နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ (၁၀)မိနစ်လောက် ကြာအောင်ထားပြီး ရေအေးနဲ့ဆေးချပေးပါ။ဒီနည်းကို တစ်ပတ်မှာ (၃)ကြိမ်လောက် ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် တင်းရင်းတဲ့ရင်သားအလှကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းအတွက် အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ မာလကာရွက် … Read more
အပျို စစ်စစ် များသာ ဖတ်ရန်…
May 16, 2020 by Lupyo News
အပျို စစ်စစ် များသာ ဖတ်ရန်…အအိုတွေ ဖတ်မိရင် စိတ်ဓါတ် ကျမှာ စိုးလို့ ပါ… ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး တမျိုး မထင်ပါနဲ့ နော် အအိုတွေ ဖတ်မိရင် စိတ်ဓါတ် ကျမှာ စိုးလို့ ပါ… အပျို စစ်စစ် ဆိုတာ က ခုခေတ်က ၁၆ နှစ် ၁၇နှစ် ဆိုရင် ကို ရည်းစား က ရှိနေကြတာ… ရည်းစားဖြစ်တာ ၁ ရက် မကြာဘူး living together က နေနေကြပြီလေ… တကယ်တော့ လက်မထပ်ရသေးပဲ နဲ့ အတူတူနေကြတာ မိန်းခလေး တစ်ယောက်အတွက် လုံးဝတန်ဖိုး ကျသွားပါပြီ… အပျိုစင် ဘဝဆိုတာ ယောင်္ကျားတိုင်း ရဲ့တန်ဖိုးထားခြင်းကို ခံထားရသူလို … Read more
ကားစီးရင် ကားမူးတတ် သူများအတွက်
ကားစီးရင် ကားမူးတတ် သူများအတွက် ကားစီးရင် ကားမူးတတ်တဲ့ သူတွေ ဒီနည်းလေးကို သုံးကြည့်။ ကားမြင်တာနဲ့ မစီးရသေးဘူး မူးတတ်တဲ့ကိုယ်။ မူးရလွန်းလို့ ခရီးဆုံးရောက်ရင် လူမမာလို ဖြစ်တတ်တဲ့ ကိုယ်။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့မှ အဆင်ပြေတော့တယ်။ ဆေးပေါင်းစုံ သောက်ဖူးတယ်။ ဂျင်းတွေ ဝါးဖူးတယ်။ ချက်တွေလဲ ပလာစတာ ကပ်ဖူးတယ်။ နည်းပေါင်းစုံ လုပ်ဖူးတယ်။ တစ်ခုမှ မထိရောက်ခဲ့ဘူး။ သွေးခုန်နှုန်း စမ်းလို့ရတဲ့ နေရာလေးမှာ ဂျင်းပါးပါးလေး အုပ်ပြီး ခုလို ကပ်ထားတော့မှ ဘာဆို ဘာမှကို မဖြစ်တော့ပဲ၊ တလမ်းလုံးလဲ စားနိုင်သောက်နိုင်၊ ခရီးရောက်ရင်လဲ လူက လန်းလန်း ဆန်းဆန်း ဖြစ်နေတော့တယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ၂ ပတ်တခါလောက်ကို ခရီးသွားေ နတာကြာပြီ။ ကားမူးတတ်တဲ့ သူတွေကို ကိုယ်ချင်းစာလို့ ပြန် … Read more
ရဟန်းလက်မခံသောအလှူ ဖတ်ရုံတင်မဖတ်ပါနဲ့ မျှဝေပေးဖြစ်အောင် ပေးခဲ့ပါ ရဟန်းလက်မခံသောအလှူ တစ်နေ့မနက် ရဟန်းတစ်ပါးဟာ လမ်းလျှောက်ပြီး ရွာထဲက အိမ်တွေမှာ ဆွမ်းခံကြွလာတယ် ….. ။ စောစောစီးစီး အရက်သောက်ပြီး အတော်လေးမူးနေတဲ့ အရက်သမား တစ်ယောက်ဟာ အဲဒီရဟန်းကို မြင်တာနဲ့ ဘေးနားက အတူလိုက်ပါသွားရင် ရဟန်းကို အော်ဟစ်ဆဲဆိုပါတော့တယ် …. ။ အမူးသမားဟာ ရွာမှာ အဆိုးဆုံး လူမိုက်တစ်ယောက်မို့ ရွာသူရွာသားတွေဟာ ကြောက်ပြီး ဘာမှ မပြောရဲကြဘူး ….. ။ ရဟန်းဟာ လူမိုက်ဆဲဆိုသမျှကို ဘာတစ်ခွန်းမှ ပြန်မပြော တစ်ချက်လှည့်မကြည့်ဘဲ အိမ်တွေမှာ ဆက်လက်ဆွမ်းခံနေတယ် ….. ။ လူမိုက်ကလည်း ရဟန်းနာက လိုက်ပါရင်း မမောမပန်း ဆက်လက် ဆဲဆိုနေတယ် …. ။ ရွာအစွန်ကို ရောက်လာကြပြီး … Read more
သူမရဲ့ ဆိုးရှာလာတဲ့ ကနျြးမာရေးအခွအေနတှေကွေောငျ့ မွနျမွနျသာသလေိုကျခငျြပွီလို့ ရငျဖှငျ့လာတဲ့ ထကျထကျမိုးဦး မင်းသမီးချောလေး ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ တစ်ချိန်က ကြော်ငြာလောကမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့သလို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေလည်း လက်မလည်အောင် ရိုက်ကူးခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့ ထက်ထက်မိုးဦးဟာ သူမရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့် အလုပ်တွေသိပ်မလုပ်ကိုင်နိုင်တော့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ထက်ထက်မိုးဦးဟာ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း တော်တော်များများကို ခွဲစိတ်ထားရတာဖြစ်ပြီး မကြာခဏနေမကောင်းဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ထက်ထက်မိုးဦးက သူမရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့် သေချင်စိတ်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကို “ရာသီဥတုကပူ၊ လူကနေလို့မကောင်း၊ ဆေးတစ်ခါသောက် တစ်ခါအန်ချင်။ တခါတလေကျ မြန်မြန်သာသေလိုက်ချင်ပါတယ်။ မသေခင်လေးတော့ ကိုယ်လှူခဲ့တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရန်ကုန်မှာရယ်၊ ထန်းမနိုင်ရွာက အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းမှာထပ်ပြီးသွားလှူသွားကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။” ဆိုပြီး ပြောထားပါတယ်။ ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ သူမရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့် စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းနေရရှာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ထက်ထက်မိုးဦးတစ်ယောက် … Read more
လေးစားတယ် မန္တလေးရေ ဝေစားမျှစား နှလုံးသားလှသူများ . . .
လေးစားတယ် မန္တလေးရေ ဝေစားမျှစား နှလုံးသားလှသူများ . . . လေးစားတယ် မန္တလေးရေဝေစားမျှစား နှလုံးသားလှသူများ ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(မန္တလေး) မှ လူတသိန်းကျော် အတွက် စားနပ်ရိက္ခာလှူ မန္တလေးမြို့ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (မန္တလေး) နှင့် ကျောက်စိမ်း ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအဖွဲ့က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် Covid -19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကာလအတွင်း အလုပ်များ ရပ်နားထားရသည်။ ထိုကာလ အတွင်း ကျာက်စိမ်းဖြင့်အသက်မွေးသော ၊ ကျောက်စိမ်းကျောက်မျက် မှီခိုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ အိမ်ထောင်စု သောင်း နှစ်ထောင် မှ လူဦးရေ ၁ သိန်းကျော်အတွက် ဆန်၊ဆီ ၊ဆား ၊ ငရုပ် ၊ ကြက်သွန် ထောက်ပံ့ရိက္ခာများ ပေးအပ်ခြင်းကို မေလ ၁၆ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းအချိန်က ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ … Read more
အပျိုအအို ဘယ်လိုခွဲကြမလဲ အပျိုအအို ဘယ်လိုခွဲကြမလဲအပျိုစစ်မစစ် ဘယ်လိုခွဲမလဲ။ တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ ခွဲခြားဖို့ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့အချက်လေးတွေတော့ ဒိုင်လျိုလေးတွေရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲ ဆိုတာတော့ သင်သိခွင့်ရပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အပျိုစစ်စစ်မှ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် ကိုယ်ခန္ဓာအစိတိအပိုင်းအချို့ ပြောင်းလဲမူကို သင်တွေ့ရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ လူအများလက်ခံယုံကြည်ထားသလို အပျိုစစ်စစ်နှင့် အအိုအမျိုးသမီးကို ခွဲခြားမှုတွင် ပြင်ပကိုယ်ခန္ဓာသွင်ပြင်ပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာများဖြင့်သာ ခွဲခြားနိူင်သည်ဟု ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အအိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည် ရင်သားများကြီးထွားပြီး တင်းပါးရိုးခွင်ကျယ်လာသည်ဟု သတ်မှတ်ထားမှုသည် တကယ်တော့ မဟုတ်ပါ။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် အမျိုးသမီးရဲ့ပြင်ပကိုယ်ခန္ဓာပုံစံအပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိတတ်ပါ။ အမျိုးသမီးငယ်သည် အပျိုဖော်ဝင်စ တရှိန်ထိုးကိုယ်ခန္ဓာဖွံဖြိုးလာမှုအပေါ် လိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့သူဟူရ်ျ တသတ်မှတ်တည်းပြောမရပါ။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် လိင်ဆက်ဆံမှုပြုပြီးနောက် ကိုယ်ခန္ဓာပြောင်းလဲလာမှုရှိသည်ဟု ပြောနိုင်သောအချက်တစ်ချက်မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိလာသောကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာကောက်ကြောင်း ပြောင်းလဲသွားသည်ဟူသောအချက်သာဖြစ်ပါတယ်။ (1) ရင်သားများ ပိုမိုတင်းရင်းလာခြင်း လိင်ဆက်ဆံခြင်းအပြုအမူသည် ဦးနှောက်အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းကို လူံ့ဆော်မှုဖြစ်စေပြီး ကိုယ်တွင်းပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်စေပါတယ်။ … Read more
မတန်တဲ့သူတွေအတွက် မပေးဆပ်ပါနဲ့ ကိုယ့်ကို နာကျင်စေတဲ့သူအတွက် မကာကွယ်ပေးပါနဲ့ ကိုယ့်ကို မျက်ရည်ကျအောင်လုပ်တဲ့သူအတွက် ပျော်ရွှင်အောင် မဖန်တီးပေးပါနဲ့ ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းတဲ့သူအတွက် ပေးဆပ်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့ တချို့ Relationship တွေမှာ ကြည့်လိုက်ရင် တယောက်တည်းကပဲ ခံစား တယောက်တည်းကပဲ ငိုရ အဲ့ဒီတယောက်တည်းကပဲ ကိုယ့် Rs သာယာအောင် ဖန်တီး နာကျင်မှုတွေ ကြိတ်မှိတ်သည်းခံ ကိုယ့်ဘဝတစ်ခုလုံးကို စတေးထား မေးချင်တယ် တန်လို့လားလို့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူအတွက်ပဲလေ ခံစားရတာ တန်ပါတယ်လို့ ခင်ဗျားတို့ ဖြေချင်လိမ့်မယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းချင်တဲ့သူဟာ တသက်လုံးလည်း ကောင်းလာမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အချိန်တန်ရင်တော့ အပြတ်ပြတ်နဲ့ နှာခေါင်းသွေးထွက်ပြီး ခွာပြဲကြရမှာပဲ ကိုယ့်ကို အရမ်းကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးပြီး အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့သူမျိုး ခင်ဗျားဘဝထဲ ဝင်လာတဲ့အခါ ကိုယ်နာကျင်ခဲ့ရတာ … Read more
ကိုဗစ် ၁၉ ဖြစ်နေချိန်မှာတောင် ဆွမ်းခံလို့ ရလာသမျှကို Food Box မှာပြန်လည် စွန့်ခဲ့တဲ့ သံဃာတော်တစ်ပါး
ကိုဗစ် ၁၉ ဖြစ်နေချိန်မှာတောင် ဆွမ်းခံလို့ ရလာသမျှကို Food Box မှာပြန်လည် စွန့်ခဲ့တဲ့ သံဃာတော်တစ်ပါး ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များဟာ ဒကာ ဒကာမတွေ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အချိန်ဆိုရင် ကူညီပေးကြပါတယ်။ စိတ်ထားကောင်းပြီး မြင့်မြတ်တာကြောင့် ကမ္ဘာပေါ် ဗုဒ္ဓဘာသာက နံပါတ် တစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလဲ ထိုင်းနိုင်ငံ တနေရာက Food Box ရှေ့မှာ ရဟနတော် တစ်ပါး ဆွမ်းခံလို့ ရလာသမျှကို ပြန်လည် စွန့်ကျဲနေတာကို အောက်က ဗီဒီယို ဖိုင်မှာ မြင်တွေ့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးလဲ ရဟန်းတော် စွန့်ကျဲနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ကြည့်ရှုပြီး ဆိုးတယ် ကောင်းတယ် တခုခု ဝေဖန်ခဲ့ကြပါအုန်း …… credit သတင်းထူးသတင်းဦးများ —————————- Unicode … Read more
လှည်းတန်းအင်းစိန်ကားမှတ်တိုင်တွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးလဲကျနေ (ရုပ်သံ) #Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် လှည်းတန်းအင်းစိန်ကားမှတ်တိုင်တွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးလဲကျနေ (ရုပ်သံ) Vedioအောက်ဆုံးတွင်ပါဝင်သည် လှည်းတန်းအင်းစိန်ကားမှတ်တိုင်တွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးလဲကျနေသဖြင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများရောက်ရှိချိန်ကိုယ်ပူချိန်တိုင်းတာရာအဖျား၁၀၉ရှိပြီးသတိလစ်မေ့မျှောနေသဖြင့်တာဝန်ရှိသူများကရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့နေ့လည်၁နာရီကျော်အချိန်ကသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ Crd AMK ————————— #Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် လှညျးတနျးအငျးစိနျကားမှတျတိုငျတှငျအမြိုးသမီးတဈဦးလဲကနြေ (ရုပျသံ) Vedioအောကျဆုံးတှငျပါဝငျသညျ လှညျးတနျးအငျးစိနျကားမှတျတိုငျတှငျအမြိုးသမီးတဈဦးလဲကနြသေဖွငျ့ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြားရောကျရှိခြိနျကိုယျပူခြိနျတိုငျးတာရာအဖြား၁၀၉ရှိပွီးသတိလဈမမြေှ့ောနသေဖွငျ့တာဝနျရှိသူမြားကရနျကုနျဆေးရုံကွီးသို့နလေ့ညျ၁နာရီကြျောအခြိနျကသယျယူပို့ဆောငျပေးခဲ့ပါသညျ။